ရှုပ်ထွေးလွန်းလှတဲ့တိုကျိုမြို့ရဲ့ လမ်းကြောင်းမြေပုံ နှင့် သိမှတ်စရာများ!! - JAPO Japanese News
လာ 03 Dec 2018, 17:32 ညနေ
အရောင်တွေအများကြီးနဲ့ အရမ်းကိုရှုပ်ထွေးနေပေမယ့် အဲ့ဒါက မြေအောက်လမ်းရဲ့ မြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂင်းဆဆန်(銀座線)၊ မာရုနော့ ဥချိဆန် (丸ノ内線)၊ ဟိဘိယဆန် ( 日比谷線)၊ သိုးဇိုင်းဆန်(東西線)၊ ချိယောတဆန်(千代田線)၊ ယူးရခုချောဆန်(有楽町線)၊ ဟန်းဆိုးမွန်းဆန်(半蔵門線)၊ နန်းဘိုခုဆန်(南北線)၊ ဖုခုတိုရှင်းဆန် ( 副都心線)၊ အိုးအဲဒိုဆန်(大江戸線)၊ အဆခုဆဆန် (浅草線)၊ မိတဆန် (三田線)၊ ရှင်းဂျူ့ခုဆန် (新宿線)၊ ဒိုဒန်းအရဂဝဆန် (都電荒川線)၊ နစ်ပရိ တိုနဲရိ ရိုင်းနား (日暮里・舎人(とねり)ライナー)။
အားလုံးပေါင်းခရီးစဥ် ၁၅ ခု ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီမှာတော့အားလုံးမဟုတ်သေးပါဘူး။ မြေအောက်ရထားတွေ သက်သက်ပါ။
အပေါ်က လမ်းကြောင်း၁၅ခုကိုထပ်ပေါင်းထည့်မယ်ဆိုရင် JR.၊ ခဲအိုး (京王)၊ တိုးဘု(東武)၊ဆဲဘု(西武) စတဲ့လိုင်းအသီးသီးနဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
ဒီလောက်ထိရှုပ်ထွေးတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းတိုကျိုလောက်ပဲလို့ထင်ပါတယ်။
ဒီမှာတော့ နိုင်ငံခြားသားမဟုတ်ရင်တောင်တိုကျိုမြို့မှာနေထိုင်တာမဟုတ်တဲ့သူဆိုရင်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာ အသေချာပါပဲ။
အားလုံးကိုမှတ်သားဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဘယ်နှစ်ခုလဲဆိုတာမှတ်သားထားတဲ့ပုံစံက ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်တွေရှိပါတယ်။
အဲ့လိုနေရာတွေကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ တိုကျိုမြို့မှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ လှုပ်ရှားကြမယ်။
ဥပမာ အားဖြင့် ယူးရခုချောဆန်(有楽町線)။ အဲ့ဒီကနေဟိဘိယဆန် ( 日比谷線
နောက်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဂျင်းဆဘူတာ ( 銀座駅) ထိ လမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့ အကွာအဝေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အဲ့ဒီအရင်ရဲ့ အရှေ့ဖက်ဂျင်းဆဘူတာ ( 銀座駅) လည်းအဲ့လောက်မဝေးတဲ့ အတွက် ရထားစီးတာထက် မြို့ထဲမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လမ်းလျှောက်တာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
တိုကျိုဘူတာနဲ့ အိုးတဲ့မြို့ ဘူတာကို မြေအောက်လမ်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
နဂတချောဘူတာနဲ့ အကဆကမိစုခဲ လည်းမြေအောက်ရထားနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ အမည်တူတွေကိုချိတ်ဆက်မထားတဲ့ ဘူတာတွေရှိပါတယ်။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ပြောင်းပြန် အနေနဲ့ တူညီတဲ့ နာမည်ဖြစ်တဲ့ အတွက် တစ်ကြိမ်လောက်တော့ အပြင်ကိုမထွက်အနေရဘူတာလည်းရှိပါတယ်။
အဆခုဆ( 浅草 )ရဲ့ အနီးနား က ခုရမအဲ ဘူတာ( 蔵前駅 ) ဖြစ်ပါတယ်။
အဆခုဆဆန် (浅草線) အိုးအဲဒိုဆန်(大江戸線) ဆိုတဲ့၂ ခုရဲ့လမ်းကြောင်းကတူညီတဲ့ဘူတာနာမည်ဖြစ်ပေမယ့် ကဒ်ဖြတ်ပြီးတော့ နောက်ထပ်ဘူတာကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ မပြောင်းလို့မရပါဘူး။
ဝေးဝေးမခွဲထားတဲ့ အတွက်ပေမယ့် မသိဘူးဆိုရင် အနည်ငယ်လန့်သွားပါမယ်။
အဲ့ဒါနဲ့တောင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကိုနောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်နေတာက အသွားအပြန်မောင်းနှင်တဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် နာရီတာလေဆိပ်ကနေ ဟာနဲတလေဆိပ်ကလမ်းကြောင်းမြေပုံ ပုံစံနဲ့ မဆက်သွယ် ထားပါဘူး။
ခဲဆဲဆန် (京成線)၊ အဆခုဆန်(浅草線)၊ ခဲဟင်းခရူးခိုးဆန်(京浜急行線) ဆိုတဲ့ ၃ခုကရဲ့ လမ်းကြောင်းကို ဆက်တွယ်ထားတဲ့ ပုံစံဖြစ်ပေမယ့် အဲ့ဒီ ၃ ခု ရဲ့ လမ်းကြောင်းကို တိုက်ရိုက်သွားတာက တစ်နာရီမှာ တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်း အနေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
အဲ့ဒါဆိုရင် လမ်းကြောင်း၃ခုလုံးက ပြောင်းစီးစရာမလိုပဲ အဆုံးထိ ထိုင်သွားနိုင်ပါတယ်။
နံပတ်က အဲ့လောက်မများတဲ့ အတွက် လမ်းကြောင်းရှာဖွေရေး Appနဲ့ web site တွေမှာ အကြံပြုချက်က နီးတဲ့ အရာတွေက ထွက်လာတဲ့ အရာတွေ လည်းထွက်လာပေမယ့် အချိန်က ငြိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဒီလိုပုံစံကို အသုံးပြုတာက အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
တူညီတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ထင်ခဲ့တဲ့ အရာက ဌာနကွဲပြားပါတယ်။
JR.ချူးအိုးဆန် ( 中央線 ) က တချိခါဝဘူတာ ( 立川駅 )အထိ သွားပြီးနောက် အများအားဖြင့် ဟချိအိုးကျိဘူတာ ( 八王子駅 ) ဦးတည်ပြီးပြေးပါတယ်။
ဆိုပေမယ့် အချို့သော အစင်းတွေက အိုးမဲဆန်း ( 青梅線 )လို့ ခေါ်ပြီးတော့ ဟချိအိုးကျိဘူတာ ( 八王子駅 )မှာဦးတည်ပြီးတော့ အိုအုမဲဘူတာ (青梅駅 ) ကိုဦးတည်ပြီးပြေးဆွဲပါမယ်။
ဘယ်ချိန်ထိစောင့်စောင့် ဟချိအိုးကျိ ( 八王子 ) ကို မလာပါဘူး။
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့ဘူတာမှာဆိုရင် ပြောင်းမစီးတဲ့ ပုံက ပိုကောင်းပါတယ်။
ဥပမာ အိုးအိုးတဲ့မချိ ဘူတာ ကအဲ့လိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။
တခြားနေရာမှာပြောင်းစီးနိုင်တယ်ဆိုရင် အိုးတဲ့မြို့ကလွဲပြီး ပြောင်းစီးတာက သက်သာပါလိမ့်မယ်။
ရှင်းဂျူ့ခုဘူတာ ၊ ရှိဘုရဘူတာ အစရှိတာလည်းပဲ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဘူတာက တူညီတဲ့ JR တစ်ဦးချင်း ရဲ့ ပြောင်းစီးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆိုပေမယ့် မြေအောက်ရထားတွေတစ်ကြိမ်ထဲမှာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီတစ်ခုပဲရှုပ်ထွေးတဲ့ တိုကျိုရဲ့ ရထားလမ်း။
အထူးသဖြင့် မြေအောက်လမ်းကရှုပ်ထွေးပေမယ့်အတွေကြုံရလာမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေလာတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
မြေအောက်ရထားကအဲ့ဒါပဲ တိုးပွားတာလျက်ရှိတာကြောင့် သွားချင်တဲ့ နေရာထိ မြေအောက်လမ်းနဲ့ သွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ မြေအောက်မှာထွက်တဲ့ ထွက်ပေါက်ကို အများကြီးထားထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် အေးချမ်းတဲ့ မြေအောက်ကို ဖြတ်ပြီးသွားလာရပြီး မြေအောက်ကနေထွက်လာရင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့နေရာကို ရောက်ပါတယ်
မြေအောက်ရထား ကိုစီးလာပြီးတော့ တိုကျို မာစတာ လုပ်ကြစို့ !
Tokyo မြို့လည်းရေအောက်ကိုရောက်သွားမှာလား ??!!!!
ယန်း၁၄၀တည်းနဲ့ ၁၀၀၀ကီလိုမီတာကျော်စီးနိုင်တဲ့ တစ်နှစ်မှတစ်ခါပေါ်တဲ့ရထား
အုရှိခုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် (牛久大仏) ရဲ့ အရွယ်အစားက ဘယ်လောက်တောင်ကြီးတာလဲ။
ခေတ်သစ်ကို ကြေငြာလိုက်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ